How'd it happen and more reports?: အမျိုးသမီး လိင်လမ်းကြွက်နို့
အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်မှဖတ်ပါ ဆေးပညာစာများ...
ဆရာခင်ဗျာ အမျိုးသမီးတွေမှာ လိင်အင်္ဂါ ကြွက်နို့ ရော ဂါ ဖြစ်နိုင်ပါသလား။ ဘယ်လို ပုံစံမျိုးနဲ့ ဖြစ်နိုင် ပါသလဲ။ အန္တရာယ် ရှိမရှိနဲ့ ဘယ်လိုပျောက် ကင်းအောင် ကုသရမလဲဆိုတာ ဖြေကြားပေး ပါခင်ဗျာ။
ဖြစ်ပါတယ်။ မနည်းလှပါ။ အမျိုးသမီးတွေမှာ လိင်လမ်း-ကြွက်နို့ ရှိနေပေမဲ့ ကလေးမရတာ မဖြစ်စေပါ။ ကိုယ်ဝန်ကိုလဲ မထိခိုက်ပါ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေတုံး ဖြစ်တဲ့ လိင်လမ်းကြွက်နို့ အတွက် Imiquimod, Sinecatechins, Podophyllin နဲ့ Podofilox တွေကို မသုံးပါနဲ့။ ခွဲစိတ်တာ လုပ်ချင်လုပ်နိုင်တယ်။ အတွဲတခုမှာ တယောက်မယ် ရောဂါရနေ၊ ပြနေရင် ကျန်တယောက်မှာလဲ ဘာမှ မပြပေမဲ့ ပိုးရှိနေပြီ။ ဒါပေမဲ့ တယောက်မှာ အဲလိုတွေ့တိုင်း ဖေါက်ပြန်သူဆိုပြီး စွပ်စွဲလို့လဲ မရပြန်ပါ။ HIV ရှိနေသူ လိင်လမ်းကြွက်နို့ အဖြစ်များတယ်။ ဆေးကုရလဲ ခက်တယ်။ Squamous Cell Carcinoma in Situ ကင်ဆာကနဦးဖြစ်နေသူ အထူးကုနဲ့ ကုသပါ။ Cervical Warts သားအိမ်ဝ ကြွက်နို့ကို Biopsy evaluation လုပ်ရမယ်။ အထူးကုသမှု လုပ်ရမယ်။
တယောက်မှာ လိင်လမ်းကြွက်နို့ ရှိနေရင် သူ့အဖေါ် (မိန်းမ-ယောက်ျား) ကိုလဲ ဆေးစစ်ရမယ်။ အမျိုးသမီးမှာ ဖြစ်နေတာဆိုရင် Pap smears သားအိမ်ဝ-ကင်ဆာ ရှိ-မရှိ စစ်ဆေးတာကို အနည်းဆုံး ၁ နှစ် လုပ်သင့်တယ်။ တကယ်လို့ ကြွက်နို့က သားအိမ်ဝမှာ ဖြစ်နေသူဆိုရင် ၃-၆ လတခါလုပ်ရမယ်။ (ကွန်ဒွန်) က HIV အတွက်သာမက လိင်အင်္ဂါကြွက်နို့ နဲ့ သားအိမ်အဝ-ကင်ဆာတို့ အတွက်ပါ ကာကွယ်ရာကျတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကြွက်နို့ ပေါက်ရာနေရာကို (ကွန်ဒွန်) က ဖုံးမထားနိုင်ရင် ကြွက်နို့မှန်သမျှကို ကာကွယ်မှု မပေးနိုင်ပါ။ လိင်ဆက်တဲ့ အဖေါ်ဆိုတာ သတ်သတ်မှတ်မှတ် ရှိသင့်တယ်။ ကိုယ့် အဖေါ်၊ ဇနီး၊ ခင်ပွန်းကို သစ္စာရှိပါလေ။
• Urethral Meatus Warts ဆီးသွားပေါက်ကြွက်နို့ကို Cryotherapy with liquid nitrogen နည်း၊ ဒါမှမဟုတ် Podophyllin 10%–25% in compound tincture of Benzoin သုံးပါ။ ဆေးမလိမ်ခင် နေရာကို ခြောက်သွေ့နေပါစေ။ တပါတ်ခါ။
၁။ Podophyllin ဆေးကနေ ကြွက်နို့ (တစ်ရှူး) တွေကို ဖျက်ဆီးပြစ်မယ်။ အနာပေါ်မှာသာလိမ်းရမယ်။ ဆေးလိမ်းပြီးနောက် ၁-၄ နာရီကြာရင် ဆေးကြောပြစ်နိုင်တယ်။ တပါတ်မှ တခါနဲ့ ၄-၆ ပါတ်ကြာနိုင်တယ်။ လိုသေးရင် ဆက်သုံးပါ။ ဆေးလိမ်းတဲ့နေရာမှာ အနေရခက်မယ်။ နာမယ်။ အနာသစ်ဖြစ်နိုင်တယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေရင် မသုံးရပါ။
၂။ Podofilox (Condylox) ဆေးက Podophyllin ဆေးနဲ့ဆင်တယ်။
ဂွမ်းစလေးသုံးပြီး ကိုယ်တိုင်လိမ်းနိုင်တယ်။ တနေ့ ၂ ကြိမ်၊ ၃ ရက် ဆက်တိုက် လိမ်းပါ။ ၄ ရက်နား ပါ။ နောက်အဲဒီအတိုင်း ၄ ခါလည်အောင် လုပ်နိုင်တယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေရင် မသုံးရပါ။ ဆေးလိမ်း တဲ့နေရာမှာ အရေခက်မယ်။ နာမယ်။ အနာသစ်ဖြစ်နိုင်တယ်။
၃။ Bichloroacetic acid (BCA) နဲ့ Trichloroacetic acid (TCA) အက်စစ် ၂ မျိုးဆေးကနေ ကြွက်နို့ တစ်ရှူးတွေကို ဖျက်ဆီးပြစ်မယ်။ ဆရာဝန်-ဆရာမကနေထည့်နိုင်ရင် ကောင်းတယ်။ တပါတ် ၁ ခါသာ ထည့်ရတယ်။ ၄-၆ ခါကြာနိုင်တယ်။ ဆေးထည့်ရာနေရာမှာ ပူလောင်တာ နာတာရှိမယ်။ ကိုယ်ဝန်ရှိလဲ သုံးနိုင်တယ်။
၄။ Imiquimod (Aldara) (ခရင်မ်) ဖြစ်တယ်။ ခုခံအားကို သက်ရောက်စေတယ်။ ညအချိန် အနာပေါ်လိမ်းရတယ်။ ၆-၁ဝ နာရီကြာရင် ဆေးပြစ်ပါ။ တပါတ်မှာ ၃ ရက်၊ ၁၆ ပါတ်အထိ လိမ်းနိုင်တယ်။ ကိုယ်ဝန်ရှိချိန်မသုံးရပါ။
၅။ Interferon (အင်တာဖရွန်) ဆေးကိုလဲသုံးတယ်။ ခုခံအားဆေး အမျိုးအစားဖြစ်တယ်။ ထိုးဆေးနဲ့ လိမ်းဆေးရှိတယ်။ ကြွက်နို့နေရာမှာ ထိုးတာက ပိုထိရောက်တယ်။ ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးက တုပ်ကွေးလို ခံစားရမယ်။ တခြားဆေးနည်းတွေနဲ့ မရမှသာသုံးပါ။ ဆေးနည်းနဲ့ ခွဲစိတ်နည်းတို့နဲ့ တွဲသုံးတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ် မသုံးရပါ။
၆။ Sinecatechins (Veregen) သစ်ပင်ကထွက်တဲ့ဆေး ကိုယ်တိုင် သုံးနိုင်တယ်။ တနေ့ ၃ ကြိမ်၊ ၁၆ ပါတ် ကြာနိုင်တယ်။ ဗဂျိုင်းနား၊ စအိုနေရာမှာလဲ သုံးနိုင်တယ်။ HIV ရှိသေူ၊ ရေယုံရှိနေသူတွေလဲ သုံးနိုင်တယ်။ အတူမနေခင် ဆေးကြောပြစ်ရမယ်။ ကွန်ဒွမ်ကို အားနည်းစေနိုင်တယ်။ ဆေးထိရာမှာ နီရဲပြီး ယားမယ်။ ပူလောင်မယ်။
လိင်လမ်းမှာ ကြွက်နို့ရှိနေသူနဲ့ လိင်ဆက်ဆံမှုရှောင်ရင် ကူးစက်တာ မဖြစ်စေပါ။ (ကွန်ဒွမ်) က ကြွက်နို့ကို မဖုံးနိုင်ရင်လဲ ကာကွယ်မှုမပေးပါ။ တယောက်ကိုတယောက် ရိုးသားပါ။ Vulva HPV မိန်းကိုယ်မှာရှိတာကို စမ်းသပ်နည်းမရှိပါ။ Cervix HPV သားအိမ်ဝ(ခေါင်း) မှာရှိတာကိုတော့ စမ်းလို့ရတယ်။
HPV vaccine ကာကွယ်ဆေး Gardasil နဲ့ Cervarix ၂ မျိုးရှိနေပြီ။ Cervarix က 70% of cervical cancers ဖြစ်စေတဲ့ (types 16 and 18) ကို ကာကွယ်မယ်။ Gardasil ကာကွယ်ဆေးက 90% of genital warts ဖြစ်စေတဲ့ (types6and 11) ကို ကာကွယ်မယ်။ လိင်မဆက်ဆံမီအရွယ်မှာ ထိုးနိုင်တာကောင်း တယ်။ ယောက်ျားတွေအတွက် (Gardasil) ဟာ လိင်အင်္ဂါကြွက်နို့ကို ကာကွယ်တယ်။ မိန်းကလေး ၉ နှစ်သမီးကနေ ၂၆ နှစ်သမီးအထိ ထိုးပေးသင့်တယ်။ ကြွက်နို့ ပေါက်နေသူ ထိုးဘို့ မလိုပါ။ HPV ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ လိင်လမ်း-ကြွက်နို့ ဖြစ်မှာကို ကာကွယ်နိုင်တယ်။ Gardasil ဆေးကို ၆ လ အတွင်းမှာ ၃ ခါ ထိုးရတယ်။ ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုး ဆိုးဝါးတာ မရှိပါ။
Warts Treatment – Battling Genital Warts in Men
This is also essential because it helps in reducing the chances of infecting your sexual partner, while also ensuring your own safety by treatment of the condition. Genital warts can be disturbing and could negatively affect your life in all aspects. Seek medical counsel and find out the cause of your problem. Your dermatologist will obviously findatreatment for you, and the sooner you start, the better it is.
Medically known as human papillomavirus, genital warts is among the common disease that is transmitted during sexual intercourse. The condition is abbreviated as HPV, and it is notaform of HIV or even herpes. The virus is highly active, and if you or your partner is suffering from it, chances are that the other might get infected inavariety of ways. The virus spreads through vaginal, oral or anal sex, and can even be transmitted with mere contact of genitals. Moreover, HPV is capable to be transmitted to both straight as well as homosexual individuals.
Unfortunately, genital warts is not always associated with symptoms, and this makes it all the more difficult to determine if an individual is really infected with the HPV. To add to the problem, warts can sometimes stay undetected foralong time until they are discovered, and the period may even range in years. Scientists have also concluded that it is possible foraperson to be infected with the virus and then pass it on to his sexual partner, while never showing the symptoms of the condition at all. All this makes it even more important to seek professional advice in this regard.
In cases where warts have been detected in an individual, the symptoms are usually known to occur in the genital areas. In men, the occurrence of the disease has been noticed in areas around the male organ, its tip, scrotum, and also in or around the anus. Warts can also appear in areas in and around the mouth ifaperson engages in oral sex with an infected individual.
Topical creams are popularly used for the treatment of warts. However, these mostly work only in the initial phases of the disorder. These creams must be recommended and applied byacertified doctor for safe and best results. Some other treatment options include use of traditional medicines and surgical removal techniques. Some very popular surgical methods in use presently are cryotherapy, electrodissection and laser treatment. While the first method will involve liquid nitrogen for freezing the warts, laser treatment works by entirely destroying the HPV usingabeam of light.
Your doctor may recommend traditional prescription medications for use if warts are detected in an initial stage, or if he or she deems it suitable. Other professional treatment options include use of medications and ablation treatments.